Pcb Chinyorwa - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill PCB vanofara kupa huwandu hwakazara hweyakajairwa uye yakasarudzika laminate uye substrate zvinhu zvinoenderana nezvinodiwa zvako zvekushandisa.
Izvi zvinhu zvinosanganisira zvinotevera zvikamu:
> FR4 (yakaenzana kusvika kumusoro Tg ratings)
> PTFE (Rogers, Arlon uye zvakaenzana zvinhu)
> Zvinhu zveCeramic
> Zvichienderana nezvinhu (polyimide)
Isu tinogara tichitarisa pamutengo wakanakisa uye nemhando yepamusoro kune vatengi vedu, isu tinowanzo kuraira kuti tidzivise kushandiswa kwevagadziri vezvinhu senge Isola naRogers kunze kwekunge zvanyatso tsanangurwa seicho chinodiwa chakaenzana nekutenderwa. Icho chikonzero ndechekuti ivo vanodhura zvakanyanya uye kazhinji ne MOQ uye vanoda nguva yakareba kuti vaunze zvinhu zvacho.
Pandawill inopa huwandu hwakazara hweFF4 substrates iyo inotambanudza yakazara Tg spectrum sekukumbirwa, uye kazhinji dhipatimendi redu reCAM ouinjiniya rinopa chirevo chakakwidziridzwa chemashandisirwo mukushandisa kwakaomarara kana HDI kunzvenga nyaya dzemukati dzakapetana panguva yegungano rekushisa.
Pandawill inopa akasiyana emhangura uremu laminates kuti agutsikane akakwira epamberi ekushandisa ePBB uye isu tinotungamira mukugovera kwealuminium substrates kuti ishandiswe mumagetsi emwenje emwenje uko iyo PCB inoshingairira kupisa kupisa mudziyo mukati megungano rakazara dhizaini.
Zvezvinhu zvinogadziriswa uye zvinoshanduka-kugadzikana, isu tinopawo yakazara dhizaini dhizaini uye yekugadzira nhungamiro kuitira kuti uwane zvakanakisa mhedzisiro yezvishandiso zvako.